ကိုဗဈကာလ မလေးရှားနိုငျငံမှာ တရားမဝငျလုပျသားဖမျးဆီးမှု မွငျ့တကျ – Voice of Myanmar
ရနျကုနျ၊ ဇူလိုငျ ၄-၂၀၂၀
မလေးရှားနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကာလအတှငျး တရားမဝငျလုပျသားဖမျးဆီးမှုဟာ မွငျ့တကျလာနတေယျလို့ မလေးရှားနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံရုံးအုပျ ဦးနိုငျမငျးကပွောပါတယျ။
“တရားမဝငျလုပျသားဖမျးဆီးမှုက ခုကိုဗဈကာလမှာ နညျးနညျးပိုမွငျ့လာတဲ့ အနအေထားရှိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံသားကိုပဲ ရှေးဖမျးတာတော့မဟုတျဘူး၊ တခွားနိုငျငံသားတှရေောပါတယျ တရားမဝငျနိုငျငံသားတှေ အကုနျပါတယျ။ သူတို့ထိနျးသိမျးခံရရငျ လ.ဝ.က ထိနျးသိနျးရေးစခနျးတှကေို ရောကျတယျ။ အဲ့ကနဆေကျသှယျရငျ သှားစိစဈပွိးတော့ ကတြျောတို့က သူတို့ပွနျဖို့အတှကျကို ဆောငျရှကျပေးတယျ။” လို့ ဦးနိုငျမငျးကပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကိုဗဈကာလမှာ တရားမဝငျမွနျမာလုပျသားတှေ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈပွီး နထေိုငျ စားသောကျရေး အဆငျမပွတေဲ့အပွငျ နရေပျပွနျဖို့ပါ မဖွဈနိုငျတဲ့အခွအေနတှေကွေောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျသှားသူ ၈ ဦးရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈပွီး ဆကျနထေိုငျဖို့ အဆငျမပွတေော့တဲ့ တရားမဝငျလုပျသား ၅၀၀၀ ကြျောဟာ နရေပျကို အစိုးရအစီအစဉျနဲ့ပွနျခှငျ့ရဖို့ စာရငျးပေးထားတယျလို့သိရပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ တရားမဝငျလုပျသားတှကေို နရေပျပွနျချေါနိုငျဖို့အတှကျ မလေးရှား ၊မွနျမာ နှဈနိုငျငံအစိုးရခငျြး ဆှေးနှေးညှိနိူငျးမှုတှပွေုလုပျနဆေဲအဆငျ့သာရှိတာကွောငျ့ ပွနျချေါနိုငျမယျ့ ကာလကို မသိရသေးပါဘူး။
“ပွနျချေါရငျ ဘယျလိုပွနျချေါမလဲ အစိုးရကုနျကစြရိတျခံချေါမလားဆိုတာ ဒုတိယအဆငျ့ညှိနိူငျးမှုဖွဈနိုငျတယျ၊ ခုပထမအဆငျ့ကတော့ ပွနျချေါဖို့ညှိနိူငျးမယျ။ဒုတိယအဆငျ့ကတော့ တငျပွရမှာပဲ။ခုတော့ခနျ့မှနျးလိူ့မရသေးပါဘူး၊ အစိုးရကတော့အကောငျးဆုံးစီမံနပေါတယျ ဒီကအဖှဲ့အစညျးအတှကျပေါ့။” လို့ ဦးနိုငျမငျးကပွောပါတယျ။
မလေးရှားကနေ နရေပျပွနျလိုတဲ့ တရားမဝငျလုပျသားစာရငျးကိုတော့ ခုခြိနျထိလကျခံနတောကွောငျ့ အမှနျတကယျ အခကျအခဲရှိနပွေီး မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျလိုသူတှအေနဲ့ မွနျမာသံရုံးရဲ့ အီးမေးလျဖွဈတဲ့ consulammenbassy@gmil. com ကို စာရငျးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ မလေးရှားနိုငျငံမှာ တရားမဝငျ ရှပွေ့ောငျးမွနျမာလုပျသားက ၂ သိနျးကြျောလောကျရှိပွီး ၊ တရားဝငျလုပျကိုငျနတေဲ့ မွနျမာလုပျသားက ၃ သိနျးလောကျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
Photo _ Thi Ha MaungMaung
ကိုဗစ်ကာလ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားမဝင်လုပ်သားဖမ်းဆီးမှု မြင့်တက်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၄-၂၀၂၀
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တရားမဝင်လုပ်သားဖမ်းဆီးမှုဟာ မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်းကပြောပါတယ်။
“တရားမဝင်လုပ်သားဖမ်းဆီးမှုက ခုကိုဗစ်ကာလမှာ နည်းနည်းပိုမြင့်လာတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားကိုပဲ ရွေးဖမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ တခြားနိုင်ငံသားတွေရောပါတယ် တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေ အကုန်ပါတယ်။ သူတို့ထိန်းသိမ်းခံရရင် လ.ဝ.က ထိန်းသိန်းရေးစခန်းတွေကို ရောက်တယ်။ အဲ့ကနေဆက်သွယ်ရင် သွားစိစစ်ပြိးတော့ ကျတော်တို့က သူတို့ပြန်ဖို့အတွက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။” လို့ ဦးနိုင်မင်းကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ကာလမှာ တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး နေထိုင် စားသောက်ရေး အဆင်မပြေတဲ့အပြင် နေရပ်ပြန်ဖို့ပါ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားသူ ၈ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး ဆက်နေထိုင်ဖို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ တရားမဝင်လုပ်သား ၅၀၀၀ ကျော်ဟာ နေရပ်ကို အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပြန်ခွင့်ရဖို့ စာရင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ တရားမဝင်လုပ်သားတွေကို နေရပ်ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် မလေးရှား ၊မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်း ဆွေးနွေးညှိနိူင်းမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲအဆင့်သာရှိတာကြောင့် ပြန်ခေါ်နိုင်မယ့် ကာလကို မသိရသေးပါဘူး။
“ပြန်ခေါ်ရင် ဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲ အစိုးရကုန်ကျစရိတ်ခံခေါ်မလားဆိုတာ ဒုတိယအဆင့်ညှိနိူင်းမှုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ခုပထမအဆင့်ကတော့ ပြန်ခေါ်ဖို့ညှိနိူင်းမယ်။ဒုတိယအဆင့်ကတော့ တင်ပြရမှာပဲ။ခုတော့ခန့်မှန်းလိူ့မရသေးပါဘူး၊ အစိုးရကတော့အကောင်းဆုံးစီမံနေပါတယ် ဒီကအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပေါ့။” လို့ ဦးနိုင်မင်းကပြောပါတယ်။
မလေးရှားကနေ နေရပ်ပြန်လိုတဲ့ တရားမဝင်လုပ်သားစာရင်းကိုတော့ ခုချိန်ထိလက်ခံနေတာကြောင့် အမှန်တကယ် အခက်အခဲရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လိုသူတွေအနဲ့ မြန်မာသံရုံးရဲ့ အီးမေးလ်ဖြစ်တဲ့ consulammenbassy@gmil. com ကို စာရင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားက ၂ သိန်းကျော်လောက်ရှိပြီး ၊ တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာလုပ်သားက ၃ သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။